Home News Gaadiid Qaraxyo Sido Sida oo Lagu Arkay Magaalada Muqdisho
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho aya shegaya in Gaari nooca raaxadda ah oo laga shakiyay ayaa yaallaa nawaaxiga Isgoyska Shaqaalaha meel ku Xarunta Hay’adda Socdaalka ay ku leedahay nawaaxiga Isgoyska Shaqaalaha.
Ciidamada NISA iyo Ciidanka Booliska ayaa xiray wadada, waxaana la sheegayaa in gaarigaan oo nooca raaxada ah halkaasi uu yaallo.
Gabi ahaanba isu socodka dadka iyo gaadiidka ayaa la xanibay, waxaana halkaasi dhooban ciidamada ammaanka.
Ciidanka Miino baarista ayaa loo yeeray si loo baaro gaariga laga shakiyay ee halkaasi yaalla, sidoo kalena loo kala ogaado inuu qarax saaran yahay iyo in kale.
Wadada Maka Al-Mukarama, ayaa waxaa ka hawlgala ciidamo badan oo Nabad Suggid iyo Boolis ah, kuwaasi oo la socda dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee gaadiidka halkaasi la soo dhigo.
Wadada Maka Al-Mukarama, ayaa dhawr mar waxaa ka dhacay qaraxyo dad shacab ah waxyeelo kala duwan gaarsiiyay, waana sababta ciidanka had iyo goor feejignaanta ay ugu jiraan.